Previous NDI OCHICHI PDP NA-AKWADO NTUGHARI NDI MMADU
Next E JIDERE ONYE ISI FRANCE OCHE, SARKOZY MAKA EGO GADDAFI
Umu akwukwo ulo akwukwo 110 nke Dapchi nke Boko Haram kpochapụrụ n’aka Gọọmenti Na-ahụ Maka Nwata Sayensị na Ụlọ Ọrụ Nkà na Ụzụ, Dapchi, na steeti Yobe na February 19, ka a gwọrọ.
Akụkọ kwuru na a na-ebugharị ụmụ agbọghọ ahụ n’ụlọ, site na ebe a hụrụ ha.
Onye na-ekwuchitere onyeisi oche Garba Shehu kwadoro akụkọ ahụ. Ma ihe ọmụma dị na oge ntụgharị.
Otu akụkọ kwuru na ndị agha Boko Haram laghachiri ụmụ agbọghọ ahụ n’isi ụtụtụ Wednesday.
Mohammed Mamman, onye na-ede akwụkwọ NAN na Damaturu, isi obodo Yobe kwuru na ọ nọ na-aga Dapchi iji gosi nkwenye nke ụmụ agbọghọ ahụ.
Abdullahi Bego, onye na-ekwuchitere Gọvanọ Ibrahim Gaidam ka na-ekwupụta ihe dị ka elekere 9 nke ụtụtụ, ma eleghị anya na-akpachara anya mgbe ọ ghaghị ikwu na ụmụ agbọghọ ahụ gbakere awa mgbe e jidere ha na February 19.
Mgbe President Muhammadu Buhari gara Damaturu na Dapchi na 14 March, o kwere nkwa na ọchịchị ya ga-eme ihe niile ga-eme iji zọpụta ụmụ agbọghọ ahụ.
“Na 19 nke February 2018, anyị na-eteta na akụkọ ọjọọ nke mwepụta nke ụmụ akwụkwọ 110 nke gọọmentị Girls Girls na Science College Dapchi. Ebe ọ bụ na ihe a jọgburu onwe ya mere, anaghị m ahapụ nkume ọ bụla a na-agbanyeghị n’ime ijide n’aka na a napụtara ụmụ agbọghọ ahụ, “ka o kwuru.
“Edewo m ndị ọrụ nlekọta na onye nlekọta-uweojii nke ndị uweojii iwu ka ha na-agba m ụgwọ na obere oge m na-agba mbọ iji weghachi ụmụ agbọghọ ahụ. N’ime ụbọchị anọ nke ihe ahụ merenụ, onye ozi nke ozi gara Dapchi na n’echi ya, onye ozi nke ime ụlọ ahụ, onye ozi nke ozi ahụ na-esonyere ya, laghachiri ụlọ akwụkwọ ahụ maka nyocha ọhụụ.
“Enwetara m iwu ka eme ka ike gwụ nke njikọ arụmọrụ na-agụnye ọrụ na ọrụ dị mkpa iji dozie ọrụ nzọpụta ahụ.
“N’ihi nke a, ndị isi ọrụ na-arụ ọrụ na-akwadoghị otu ụlọ ọrụ iwu dị n’otu na Maiduguri, ndị agha ebulitela ọtụtụ ìgwè ndị nnapụta ka ha jikọta ọhịa dị na Northeast theater nke arụmọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, ndị na-ahụ maka ndị agha Naijiria ejiriwo nlezianya na-enyocha mpaghara ahụ.